बैंकहरुद्धारा निक्षेपको तीन गुणासम्म कर्जा प्रवाह, निरन्तर बढ्दै सीसीडी अनुपात | Notebazar
बैंकहरुद्धारा निक्षेपको तीन गुणासम्म कर्जा प्रवाह, निरन्तर बढ्दै सीसीडी अनुपात
काठमाडौं। १६चैत्र, २०७७, सोमबार / Mar 29, 2021 17:20:pm
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग उल्लेख्य रुपमा बढ्न थालेको छ । बैंकहरुले माग अनुसार कर्जालाई सम्बोधन गर्न समेत नसकेको अवस्था देखिएको हो ।
पछिल्लो समयमा कोरोनाका कारण प्रभावित भएको आर्थिक क्षेत्रले गति लिएसँगै बैंकहरुमा कर्जाको माग बढेपछि बैंकहरु पनि कर्जा विस्तारमा आक्रमक देखिएका छन् । बैंकहरुले निक्षेपको दोब्बर, तेब्बरसम्म कर्जा लगानी गरेको अवस्था छ ।
फागुन महिनामा बैंकहरुले ४० अर्ब निक्षेप संकलन गरेका थिए । सो अवधिमा बैंकहरुले ९५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रबाह गरेका थिए । चैत्र महिनाको १३ गतेसम्ममा बैंकहरुले २४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रबाह गरेका छन् । बैंकहरुले चैत्र महिनाको पछिल्लो एक साता अर्थात ६ देखि १३ गतेसम्ममा मात्र १० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रबाह गरेका छन् ।
पछिल्ला दिनहरुमा आयातमा आएको वृद्धि र शेयर तथा घरजग्गाको कारोबारमा आएको उत्साहले बैंकहरुमा कर्जाको माग बढेको हो । व्यापार व्यावसायहरुमा आएको गतिका कारण बैंकहरुमा कर्जाको माग बढेको बैंकहरु बताउछन् ।
कर्जा प्रबाहमा बैंकहरु आक्रमक हुँदा तरलतामा समेत केही दबाब परेको अवस्था थियो । तरलतामा दबाब परेपछि बैंकहरको अन्तर बैंक दर नै करिब ४ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको थियो । तर,नेपाल राष्ट्र बैंकले कारोना प्रभावितलाई दिने भनेको पुनरकर्जा सुविधाको रकम बजारमा आएपछि केही सहज भएको हो । अहिले अन्तर बैंक ब्याजदर करिब डेढ साताको अवधिमा घटेर ०.६५ प्रतिशतमा झरेको छ । अन्तर बैंक ब्याजदरमा देखिएको उतारचढावले पनि तरलता प्रयाप्त रहेको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि कोरोनाका कारण विग्रेको उत्पादन तथा वितरणको संयन्त्र लयमा फर्कनका लागि प्रयोग आउने भन्दै अधिक तरलतालाई नीतिगत रुपमा व्यवस्थापन नगरेको हो । नियमित भन्दा अन्य नीतिगत दरहरुबाट बजारमा तरलता समस्या नहुने गरी मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दै आएको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको माग बढ्न थालेपनि बैंकहरुले कर्जाको छनोट गर्ने, निक्षेपमा केही ब्याजदर बढाउने लगायतका गतिविपध सुरु भएको थियो । तर, पुनरकर्जाको रकमले तत्कालका लागि बजार तरलतामा दबाब नपर्ने अवस्था आएको छ । तर, चैत महिनाको अन्तिमसम्म सरकारी खर्च नवढेको खण्डमा तरलतामा समस्या पर्ने एक बैंकरले बताए । अहिले बैंकहरुको औसत पूँजी कर्जा निक्षेप अनुपात पनि दैनिक रुपमा बढीरहेको छ । गत बिहीबारसम्ममा बैंकहरुको पुँजी कर्जा तथा निक्षेप अनुपात ७७.७२ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो गत बुधबारको तुलनामा धेरै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुको पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपात ८५ कायम गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा सस्तो ब्याजदरका कारण पनि कर्जाको माग उच्च देखिन्छ । ब्याजदर सस्तो भएका कारण दिर्घकालिन योजनाका सञ्चालकहरु पनि यहि समयमा कर्जा माग बढेको छ ।
कोरोनाका कारण बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थपिने, कर्जा रोकिने हुँदा अधिक तरलताको समस्या देखियो । अधिक तरलताका कारण बैंकहरुले निक्षेपमा दिन ब्याजदर घटाएपछि बैंकहरुबाट निक्षेपमा राखिएको पैसा समेत बाहिरिन थालेको थियो । बचतको ब्याजदर न्यून भएपछि बैंकबाट पैसा बाहिरिन थालेसंगै तरलतामा पनि दबाब पर्न थालेको थियो ।
पछिल्ला दिनहरुमा कोरोनाको दोस्रो लहरको हल्लाले गर्दा आम जनमासनमा त्रास बढेको अवस्था छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा कर्जाको मागमा कमी आउन सक्ने जोखिम भने देखिन्छ ।
चैत १३ गतेसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले कुल ३८ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छन् । यो अवधिमा बैंकहरुले ३४ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
मर्जर तथा एक्विजिशनको पहल नगर्नेमा अधिकांश विदेशी लगानीका बैंक2days ago
निषेधाज्ञामा दिइने बैंकिङ सेवा सम्बन्धि जानकारी दैनिक रुपमा प्रदान गर्नुपर्ने4days ago
वाणिज्य बैंकहरुको औसत प्रतिफल १३.८१ प्रतिशत, एनआईसी एशिया अंग्रपक्तिमा4days ago
ईपिएस र पिई रेसियोको आधारमा कुन बैंक उपयुक्त ? ८ वटा 'ओभरभ्यालुड'6days ago
बैंकिङ इण्डष्ट्रिलाई ‘लिड’ गर्दै नबिल, कुन बैंकको लाभांश क्षमता कति ? 1 week ago
बैंकहरुले नाफाका लागि गैर बैंकिङ क्रियाकलाप विस्तार गर्दा जोखिम बढ्दै 28/04/2021
नाफा वृद्धिदरको आधारमा 'ब्लु चिप' मानिएका बैंकहरु 'टप टेन' मा पनि अटेनन् 28/04/2021
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठेगानामा ‘गुगल प्लस कोड’ 26/04/2021